ULAS J1120+0641 - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွေဆာသည် အလယ်ဗဟို၌ အနီစက်အဖြစ်ပေါ်လာသည်။
လေ့လာရေးဒေတာ (Epoch J2000.0)
11° 20′ 01.48″
၂၈.၈၅ Gly (၈.၈၅ Gpc) (ယှဉ်တွဲအကွာအဝေး) 
၁၂.၉ Gly (၄.၀ Gpc) (အလင်းဖြတ်သန်းချိန်[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အခြားကြည့်ရန်: ကွေဆာ, ကွေဆာများစာရင်း
ULAS J1120+0641 သည် အဝေးဆုံးမှ ကွေဆာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယှဉ်တွဲအကွာဝေးမှာ အလင်းနှစ် ၂၈.၈၅ ဘီလီယံရှိသည်။ ယင်းသည် အနီရောင်အရွေ့ ကျော်သည့် ပထမဆုံးကွေဆာလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ [note ၁]
↑ Various news reports, including those provided by the Associated Press, have stated that it is the brightest object seen so far in the universe. Such statements are erroneous, however; other quasars are known to be at least 100 times more luminous.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Daniel J. Mortlock (2011). "A luminous quasar ataredshift of z = 7.085". Nature 474: 616–619. doi:10.1038/nature10159. PMID 21720366. Bibcode: 2011Natur.474..616M.
↑ Steve Warren (May 2011). "Photometry of the z=7.08 quasar ULAS J1120+0641". Spitzer Proposals 80114. Bibcode: 2011sptz.prop80114W.
↑ Jackson၊ Nicholas။ "Early Quasar Is Brightest Object Ever Found in the Universe"၊ 30 June 2011။ 30 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "ULAS J1120+0641 took the brightest object title from another quasar that wasn't formed until about 100 million years later, when the universe was 870 million years old."
↑ "An Observational Determination of the Bolometric Quasar Luminosity Function" (2007). The Astrophysical Journal 654 (2): 731–753. doi:10.1086/509629. Bibcode: 2007ApJ...654..731H.
ဤ ကွေဆာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ULAS_J1120%2B0641&oldid=341544" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။